Ngwongwo Forex kacha mma maka ịzụ ahịa - Nweta nduzi zuru ezu nke Eprel 2021
Mụọ 2 Trade 2021 Forex Robots Nyocha
Maka ndị gị na-atụlebeghị mgbanaka mgbanaka, ọ bụ ụzọ dị mma iji nweta ego na-abaghị uru. Ndị na-arụ ọrụ mgbanaka dị ka onye inyeaka onwe gị, na-eji ntọala, iwu na nyocha nyocha iji zụta ma ree n'aha gị.
Ọ bụrụ na ị bụ ụdị onye na-achụ ego nke na-achọghị ibuli mkpịsị aka gị, robot ga-emere gị nyocha na nyocha niile. A maara nke a dị ka 'akpaghị aka n'ụzọ zuru ezu' ma ga-eme ahịa ahịa na-akpaghị aka.
Fọdụ ígwè ọrụ na-enyere gị aka iji ha dịka sistemụ na-akpaghị aka. Nke a nwere ike ịpụta na ikpo okwu na-arụ ọrụ ụkwụ, na-ezitere gị nzụrụ ma ọ bụ ire ere wee kpebie ihe ị ga-eme.
Anyị ejikọgo ọnụ ụzọ zuru oke na igwe eji arụ ọrụ, na-ekpuchi ihe ha na-eme, elele na ọghọm. Anyị etinyekwala 5 nke kachasị mma robots nke 2021 maka ịtụle taa.
FX Fury Forex Robot - Gbanwee Ahịa Ego Gị
Gbanyere na ntụkwasị obi na ọnọdụ robot
Rịpụta nsonazụ na Myfxbook
Mmeri mmeri nke 93%
Ego otu apụ - enweghị iwu maka ịkwụ ụgwọ ọnwa kwa ụbọchị
Gaa Leta Forex
Gịnị bụ Forex ígwè ọrụ na-?
Mgbe ọ na-abịa Forex trading, akụkụ buru ibu nke usoro a na-ewepụta oge iji nyochaa mgbanwe na mmegharị ahịa ahịa ego. Ghara ikwu banyere ịgbaso akụkọ ụwa na akụnụba ụwa.
Investorsfọdụ ndị na-achụ ego na-ebi ndụ oge niile site na ịzụ ahịa ma nwee ike ịrara 8 awa kwa ụbọchị na nyocha na ịmegharị n'ime ahịa. N'aka nke ọzọ, ụfọdụ mmadụ anaghị azụ ahịa na Forex.
Ndị ọzọ anaghị enwe oge iji mụta ihe niile na chaatị dị iche iche ma na-anwa ịnwe akụkọ ọhụụ. Nke a bụ ebe mgbanaka mgbanaka na-abata. A sị ka e kwuwe, anyị bi na ụwa na-agba ọsọ ọsọ na ngwa ngwa - yabụ sistemụ akpaghị aka na-ewu ewu ngwa ngwa.
Ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị ahịa azụmaahịa na-erite uru nke sistemụ ndị a ọkaibe, ebe ha nwere ikike ịme ahịa azụmaahịa site na mmalite ruo na njedebe na-enweghị ịme ihe.
Ihe ị ga - eme bụ inye ego site na nkwụnye ego, ma ị nwere ike ịme ihe ị na - eme kwa ụbọchị. Rox forex gị nwere ihe niile n'okpuru njikwa.
Olee otu Forex ígwè ọrụ na-?
Na nkenke, a forex robot bụ nnoo a trading ngwá ọrụ nke na-eji algọridim n'akụkụ oru analysis. Na robot na-enyocha ahịa azụmaahịa maka ịchọ ahịa bara uru.
Dị ka anyị kwuru na nke a nwere ike ịdabere na mbụ trading azum ma ọ bụ enwere ike akpaghị aka maka ndị ahịa azụmaahịa nwere ahụmahụ.
Ka anyị ga-ekwu maka obere oge na-aga, otu n'ime uru doro anya nke iji mgbatị mgbatị iji zụọ ahịa bụ enweghị mmetụta mmetụta uche, yana ikike ịnọ na bọl 24/7.
Uru nke Forex robot
Dị ka ị maara ugbu a, forex robots na-enyere gị aka ịzụ ahịa na akpaghị aka. Ọ bụrụ na ịnweghị itching ka ịmalite, n'okpuru n'okpuru anyị edepụtara ụfọdụ uru ndị bara uru n'iji robot forex.
Otu uru dị ukwuu nke iji robot forex bụ ikike ya ịme nyocha na-enweghị njedebe na-enweghị mkpa ibuli mkpịsị aka. A otutu nke nwere ahụmahụ investors agbasaghị ilekwasị anya dị nnọọ ole na ole akpan owo klas. Ọhaneze bụ na ọ ka mma ịnweta nghọta gụrụ akwụkwọ banyere mmadụ ole na ole ahọrọ.
Nke a bụ n'ihi na ị na-etinye n'ọtụtụ nchụso, ọ ga-abụ na ị gaghị enwe oge zuru ezu iji nyochaa ngwongwo ọ bụla. N’ụzọ dị mkpa, itinye ihe dịgasị iche na ntuziaka ga-abụ usoro siri ike nnabata.
N'aka nke ọzọ, mgbe ọ na-abịa na mgbanaka mgbanaka, anaghị egbochi ya etu onye na-achụ ego mmadụ ga-esi. A robot nwere ike nyochaa ọtụtụ puku ahịa n'otu oge na-enweghị nsogbu ọ bụla na ikike nhazi ya.
Enweghị Mmetụta otionszụ ahịa
Onye ahia ọ bụla nwere oge maara na mmetụta atọ nke ịzụ ahịa - egwu, anyaukwu, na olileanya - bụ ihe ị ga-elezi anya.
Ntinye ego nwere ike gbanwee oge kacha njọ ma ọ bụrụ na ị hapụ mmetụta uche. N'ime nke a, ị ga - ahụ onwe gị ime mkpebi ndị enweghị isi. Nke a nwere ike ibute ọdachi na pọtụfoliyo itinye ego gị.
Nke a bụ ụzọ ọzọ nke forex robot nwere ike isi baa uru, ebe ha ziri ezi ma bụrụkwa ihe ezi uche dị na ya site na imepụta ya - na-eme ka ọnụọgụ ma na-eme 'mkpebi' n'enweghị mmetụta ọ bụla. Emebere usoro a ka ị gbaso ọnọdụ nkwupụta echiche nke mere na ọ nweghị ike ịme azụmaahịa na-enweghị isi.
Dingzụ ahịa 24 Awa ụbọchị, ụbọchị asaa n'izu
Ngwaọrụ Forex na-enwu ebe a. N'ezie, anyị bụ ụmụ mmadụ chọrọ ihi ụra na izu ike ka anyị wee rụọ ọrụ ọfụma ma mee mkpebi ndị ziri ezi kwa ụbọchị.
Ka anyị kwuo na ị bụ onye na-azụ ahịa oge niile oge niile bụ ịrara awa 5 na nyocha ahịa ndị dị mkpa, yana oge 4 na-eme nchọpụta gị.
Ọ bụ ezie na ụbọchị elekere 9 nwere ike ịba uru ma nwee ike ịme ezigbo ndụ. Cheedị ego ole ị nwere ike ị nweta n'otu ụbọchị ahụ ma ọ bụrụ na ị nwere ike nyocha 24/7?
Ebe anyi kwesiri iji weghachite ma megharia ohuru, ndi mmadu ndi mmadu nwere ike ihu ka ihe ha choro n’enye gi - 24 awa ubochi, na ubochi asaa n’izu.
Nke a abughi naanị aka maka ndị ahịa nwere ọtụtụ awa iji chekwaa otu ụbọchị, kamakwa maka ndị nwere oke ọrụ na-achọghị itinye ihe ọghọm na-efu.
Aka maka Newbie ahịa
Uru ọzọ nke iji robot forex bụ na ndị nwere ego nwere nnukwu ahịa zuru ụwa ọnụ, na-enweghị iji ọnwa ole na ole nyocha na ịmụ otu esi azụ ahịa. Dị ka ọ dị, usoro ahụ nwere ike ịdị na-achọsi ike, mgbe ụfọdụ na-ewe ọtụtụ ọnwa iji ghọta ahịa ahụ.
Na robot agaghị ekwe ka ị sonye na oghere itinye ego. Mana, mekwaa ka ịgabiga mkpa iji mụta otu esi agụ ma ghọta usoro ọnụahịa, ihe ntanetị na eserese. Ndị a niile dị mkpa maka azụmaahịa azụmaahịa.
Agbanyeghị, n'ihi na teknụzụ a na - ekwu maka ya na - akpaghị aka, ịnwere ike ịnọdụ ala ma hapụ ka robot forex zụta ma ree akụ na nnọchite gị.
Ego ole ka Forex Robot na-efu?
Azịza nye ajụjụ a abụghị ihe dị mfe, dị ka mgbanaka azụmaahịa azụmaahịa dị iche na ọnụahịa site na oke. Offọdụ n'ime usoro ndị a na-arụ ọrụ na ntọala ọrụ. Nke a pụtara na ikpo okwu a na-ekwu maka ya ga-ewere pasentị akọwapụtara na azụmaahịa ọ bụla mere nke ọma maka gị.
Iji maa atụ, ka anyị were ya na ikpo okwu ị họrọ nwere ọkwa ọrụ akwadoro nke 12%:
Anyị ga-asị na ị na-etinye $ 3,000 n'ime Forex robot
A na-eme ahịa 100 n'oge ọnwa
ROI bu 15% nke ya na $ 450
Ugbu a, ikpo okwu ga-ewere ọrụ 12% ya bụ $ 54
A ga-ahapụ gị $ 396 na uru
Otu n'ime ihe kachasị mma gbasara ụdị ọrụ ụdị a bụ na onye na-eweta ọrụ ga-akpata ego naanị mgbe ihe na-aga nke ọma.
Nke a pụtara na ọ kachasị mma onye na-eweta ọrụ iji gbalịa ịbawanye ROI gị site na ịtụkwasị gị azụmaahịa anya. Nnukwu uru onye na-eweta robot na-enweta maka gị, ka ha na-eguzo iji nweta onwe ha.
N'ọnọdụ ndị ọzọ, ị ga-akwụ ụgwọ ego dị larịị iji nweta forex robot. Then ga-ahụ mkpa ịwụnye robot ahụ n'ime usoro azụmaahịa ndị ọzọ dịka MT4 ma ọ bụ MT5. Agaghị enwe ụgwọ ma ọ bụ ọrụ na-aga n'ihu, dịka ịzụrụlarị sọftụwia na-akpata.
Igodo isi dị na ebe a bụ na ị gaghị erite uru site na mmezi na-aga n'ihu. Nke ahụ bụ ịsị, ahịa azụmaahịa nwere ike ịgbanwe na ọsọ ọsọ, nke pụtara na ndị na-eweta Forex kachasị mma ga-aga n'ihu na-emelite koodu ahụ.
Ndi Forex robot bụ ojoro?
E nwere ọtụtụ puku forex robot enye si n'ebe. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-enye ọrụ 'na-enye' mmeri dị ịrịba ama dị n'etiti 80% na 90%, yana oke nloghachi kwa ọnwa.
Ndị a bụ ndị na-enye ọrụ ịkwesịrị ilezi anya, dịka ha nwere ike ịbụ ndị aghụghọ. Ndị wayo a na-enye rọbọt ndị na-arụ ọrụ, mana inye ụdị ntụkwasị obi nke ga-aga nke ọma agaghị ekwe omume.
O bu ihe nwute nye ufodu, ha na achoputa na nkwa nke onu ogugu mmeri di otua enweghi ihe ndabere, mgbe ha tinyechara ego ha nwetara. Advicefọdụ ndụmọdụ ga - abụ - ọ bụrụ na ọ dị oke mma ịbụ eziokwu - ọ nwere ike bụrụ. Agbanyeghị, ịkwesighi ide ya ozugbo.
Ezi echiche bụ naanị isonyere ndị na-enye gị onyinye na-akwụghị ụgwọ, nnwale ma ọ bụ nkwa ịkwụghachi ego ma ọ bụrụ na afọ ojuju gị. Ọ dịkarịa ala n'ụzọ a, ị naghị emeghe onwe gị maka ihe egwu nke ịlafu nnukwu ego nke ego gị siri ike, naanị ịchọpụta na ọ bụ robot forex.
Esi Họrọ Forex Robot
Ikwesiri ịkpachara anya mgbe ị na-ahọrọ robot forex, ọ bụghị ma ọlị n'ihi na e nweela ọtụtụ ikpe ebe ebubo nke ndị na-eweta robot na-aghọ bụ ụgha. E nwere ọtụtụ puku n'ime ha n'ebe ahụ, mana karịa na nke ahụ mechara.
N'akụkụ a, anyị na-atụle ihe ịchọrọ ịma mgbe ị na-ahọrọ ọrụ 'niile' na ọrụ. Nke ahụ bụ ịsị, ịgaghị achọ ibudata ma ọ bụ wụnye MT4 / MT5 ma ọ bụ wụnye robot n'onwe gị. Kama, ndị ọrụ a na-arịọ gị ka ị debe ego ma lekọta ndị ọzọ.
Ego ole ka ị chọrọ?
Dị ka ị maara ugbu a, enwere ụdịdị dị iche iche ma a bịa n'otue akpaghị aka a Forex robot nwere ike ịbụ. Ikwesiri inwe echiche banyere otu ị ga-esi zụọ ahịa, nke pụtara otu ị ga - esi sonye n'ime mkpebi na - eme mkpebi site na mmalite ruo n'ọgwụgwụ.
Ga-achọ ịkwụnye ma nyefee reins n'aka Forex robot? Nwere ike ịnọdụ ala ma kwe ka robot forex mee ihe niile metụtara azụmaahịa - njedebe na-akwụsị ọrụ ka anyị kwuo.
Ma ọ bụ ikekwe ị ga-ahọrọ ijide ụfọdụ njide? Fọdụ ndị ọchụnta ego na-achọ iji robot forex iji nyocha na-akpaghị aka ma rụọ ọrụ ụkwụ n'akụkụ ahụ.
Ka oge na-aga, mgbe ị bịara itinye azụmaahịa ị nwere ike ichere maka mgbaama wee kpebie onwe gị ma ị ga-aga n'ihu ma mee ya. Yabụ, imeghe ma ọ bụ mechie ọnọdụ, ma ọ bụ gbanwee uru ahụ ma ọ bụ ịkwụsị ọnwụ nke ọnọdụ dị na azụmaahịa ahụ.
N'ikpeazụ, ọ na-adị mma mgbe niile ịlele nyiwe nke onye na-eweta ọrụ iji hụ ụdị azụmaahịa forex robot na-eji.
Kedu ihe bụ ego kacha nta?
Fọdụ ndị na-eweta robot forex na-ekwupụta obere ego tupu ha ekwe ka ị nweta ọrụ ahụ. N'iburu nke ahụ n'uche, ọ bụ ezi echiche ịlele ihe nkwụnye ego kacha nta, yana ikekwe họrọ nke nwere ntakịrị mmalite mmalite.
Ọ ga-abụ ihe na-agbawa obi itinye ego $ 3,000 n'ime ego gị, ka ị chọpụta mgbe e mesịrị na ọ bụ ndị na-eweta robot na-aghọ aghụghọ. N'ozuzu, ị kwesịrị ịtụ anya nkwụnye ego pere mpe nke ihe dị ka $ 250. Ọ bụrụ n'ịchọta ikpo okwu nwere nkwa ịkwụghachi ego ka afọ ojuju gị n'ime ụbọchị 30, mgbe ahụ ọ bụ ezigbo akara.
Nkwupụta Ndị Na-enye Ihe Hà Dị Adị?
Inye nkwa nke 80% nloghachi kwa ọnwa dị mfe. A sị ka e kwuwe, ihe dị ka onye ọ bụla nwere ike ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ na-ekwu okwu ụgha taa. Ọ bụrụ na ọnụahịa ahụ dị ka ihe adịghị ọnụ ala ma dịkwa oke mma ịbụ eziokwu, yabụ na ọ nwere ike.
Ọ bụrụ na onye na-eweta Forex na-enye 95% 'nkwụghachi ụgwọ ga-ekwe nkwa' yana nnukwu okwu nke nnukwu uru nwere obere ihe ọghọm - nke ahụ bụ ọhụụ ọzọ na-acha ọbara ọbara maka enyo.
Dị ka anyị kpuchiri nkenke na mbụ, ọ dị mma mgbe niile ịga na ígwè ọrụ mgbanaka nke na-enye nyocha nsonaazụ. Platformsfọdụ nyiwe dị njikere ịnye nkwa ịkwụghachi ego, ndị ọzọ nwere ike ịnye gị nnwale n'efu ụbọchị 7 ma ọ bụ ngosi.
Demos bụ ezigbo nhọrọ maka ndị ọhụrụ na ndị ahịa nwere ọkaibe, n'ihi na ị nwere ike ịnwale akara ngosi akpaghị aka tupu imefu ihe ọ bụla. I nwekwara ike lelee nkwekọ nke onye na-eweta ọrụ site na ịmụ nsonaazụ nyocha.
Ndị a na-egosi usoro eji eji azụmaahịa ejiri ihe ịga nke ọma ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ n'ime oge. More banyere nke ahụ mgbe e mesịrị. Otu ụlọ ọrụ ziri ezi ga-enwe ike ịme ọnụọgụ na nsonaazụ dị ngwa maka ndị ahịa, kama iji ahịa aghụghọ na nnukwu nkwa nke akụ na ụba buru ibu.
Pụrụ Inweta Ego Gị?
Ihe ikpeazu ịchọrọ ka a gbaa gị bụ oge mgbapụta dị ogologo. Ọ dị mma mgbe niile ijide n'aka na onye na-eweta robot forex ga-enyere gị aka ịnweta ego nke gị mgbe ọ bụla masịrị gị, na-enweghị ike iwepụ. Na-enyocha usoro na ọnọdụ mgbe niile.
Gịnị bụ Paykwụ Optionsgwọ Nhọrọ?
Ọ bụghị igwe robot niile bụ otu. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ na-ekwe ka nkwụnye ego / wepụ na cryptocurrencies. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwere usoro ịkwụ ụgwọ a kapịrị ọnụ (dịka Visa), ị kwesịrị ijide n'aka na ị ga-enyocha ozi a iji jide n'aka na ikpo okwu ga-adabara.
Kedu Ego m nwere ike ire?
Dị iche iche Forex robot ọkachamara na iche iche ego abụọ. You nwere ike ịchọpụta na ọ na-enyocha ọtụtụ ụzọ abụọ dị ka ụmụ aka, majors na exotics. Ebe ụfọdụ nwere ike ịlele naanị ụzọ abụọ.
Ọ dị mkpa ịnwe nkọwa zuru ezu banyere ego gị na ebe ha nọ nyekwara.
E nwere ihe ole na ole ndị ọzọ ị nwere ike ịtụle na ọchịchọ gị ịchọta ezigbo robot forex gị.
Enwerela Forex Robot a nwalere?
Nyocha nke oge a ga-enye gị ezigbo ihe ngosi nke otu sistemụ si arụ ọrụ yana ọtụtụ ọnọdụ ahịa dị iche iche dịka akụkọ dị mkpa, obere na nnukwu volatility na ọkwa.
Aka Robot, ịtụ iwu na keyboard laptọọpụ, ahia mgbanwe. Robot trading system bụ usoro azụmaahịa kọmputa nke na-enyefe ahịa ozugbo na mgbanwe na-enweghị mmemme mmadụ. Omimi nke ubi na-elekwasị anya na mkpịsị aka.
A na-anwale nyiwe kachasị mma na ego abụọ dị iche iche yana ọnọdụ ahịa ndị ọzọ. Ule ndị a na-egosipụtakarị ihe kachasị dịkarịa ala na nke kachasị, mmeri na ọghọm enwere ike, yana oke ụgwọ ọrụ. Fọdụ ndị na-ere ahịa ga-emere gị ule a.
Ozi ahia Live
Ọtụtụ ndị na-eweta robot forex na-ekwe nkwa 90 - 99% mmeri oke. Agbanyeghị, nke a abụghị mgbe niile. Anyị ga-akwado naanị ụlọ ọrụ ndị ziri ezi na oghere robot forex.
Nsonaazụ nwere ike ịdị iche ma a bịa na 'azụmaahịa oge' na 'ahịa echepụtara', ebe enwere ike ịchịkwa usoro ikpeazụ ahụ. Nke a pụtara na ọ naghị egosi oke ego, nke nwere ike ịdị mkpa maka azụmaahịa oge.
Enwere Oke Ime?
Ọzọ echiche bụ otú Forex robot si arụ ọrụ mgbe ị gbanwere ogo nke iwu gị. Greatzọ dị mma iji nwalee nke a bụ ịnwale ngosi ma ọ bụ nnwale efu.
Platformsfọdụ nyiwe na-arụ ọrụ nke ọma mgbe ị na-arapara n'usoro yiri ya, mana ọ nwere ike belata uru ị bara ma ọ bụrụ na mgbanwe agbanwee nha usoro ahụ. Ihe kachasị mma robot bụ nke na-eme nke ọma n'agbanyeghị agbanyeghị.
Ndabere Forex Robot
Ihe nkwụsị bụ ọdịiche dị n'etiti ọkwa dị ala na-esote na njikwa akaụntụ azụmaahịa gị na ebe dị elu. Nnoo dị iche na itule akaụntụ gị na-egosipụta ego furu efu site na ịhapụ ahịa.
Onweghi ndi ahia abuo, dika ufodu ndi mmadu choro ka ha wepuo 15%, ebe ndi ozo nwere ike kwado onodu nke 5%.
Nke a bụ kpam kpam n'okpuru gị. Nwere ike ịlele nke a na ndokwa abụọ dị iche iche yana na ahia site na ahia.
Otu esi amalite site na Forex Robot
Anyị ga - agabiga ihe niile ịchọrọ ịma tupu ịbanye na onye na - eweta robot. Ihe omuma a gha eme ka itu uzo di nma ma aga ebe ozo.
Nzọụkwụ 1: Họrọ Onye na-enye Forex Robot
Iji nweta bọl na-agagharị, ị ga-ahọrọ nke mgbatị mgbatị ịchọrọ iji. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta onye na-eweta ọrụ nke na-egbo mkpa gị kacha mma, anyị na-atụle igwe ojii kachasị mma nke 2021 gbakwunyere na ntuziaka a.
Kwụpụ 2: Kpebie gbasara Azụmaahịa Gị
On some forex robot nyiwe, e nwere a dịgasị iche iche nke trading nhọrọ ịhọrọ site na. Ndị a sitere na ụdị akụnụba akụ dị iche iche ị nwere ike ị nweta, na nghọta maka ị nweta uru na ịkwụsị-ọnwụ.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ n’ụwa nke ahia n'ịntanetị mgbe ahụ ọrụ zuru ezu akpaghị aka ga-abụ nhọrọ ka mma maka gị. Forex robot ga-azụ ahịa ka ị wee ghara.
Dị ka anyị metụrụ na mbụ, iji akaụntụ ngosi ma ọ bụ ọbụna nnwale n'efu bụ ụzọ dị mma iji mara nke ọma na ntọala.
Kwụpụ 3: Nkwụnye ego ma bido ịzụ ahịa
Ugbu a ị debanyere aha, ị nwere ike ịga n'ihu tinye ego ụfọdụ. Dị ka anyị kwuru, usoro ntanetị dị iche iche na-anabata usoro ịkwụ ụgwọ dị iche iche.
Ka e were ya na ị chọpụtalarị ihe dịịrị gị. Ga-achọkwa ijide n'aka na ị maara ihe nkwụnye ego kacha nta dị. Ozugbo ị nwere obi ụtọ ma tinye ego mbụ gị, ị ga-amalite ịnata Forex n'ókè.
Biko rịba ama na ọ bụrụ na ị kpebiri ịga na akaụntụ aka, ị ga-atụ anya itinye ahịa ahụ n'onwe gị. Ọ bụrụ n’ikpebie iji aka gị rụọ ọrụ nke ọma, ịgaghị eme ihe ọ bụla.
Zụta Forex Robot maka MT4 / MT5
Enwekwara ike zụta robot forex site n'aka ndị na-eweta ntanetị, wee budata ngwanrọ na kọmputa gị. Mgbe ahụ, ị ​​ga - ebugo faịlụ sọftụwia na MT4 / MT5. N'ime ime nke ahụ, robot ga-amalite azụmaahịa ozugbo.
Can nwere ike, n'ezie, setịpụrụ ụfọdụ usoro azụmahịa. Nke a ga-agụnye ọnụọgụ dị ka opekata mpe na oke azụmaahịa gị. Ọ bụrụ na ịhọrọ usoro a, ị kachasị mma ịgba ọsọ MT4 / MT5 na ọnọdụ ngosi maka ọtụtụ izu iji jide n'aka na robot kwesịrị ekwesị maka nzube.
Etu esi achoputa ihe ahia ahia nke Forex
N'ọtụtụ ikpe, ị ga-edebanye aha na onye na-ere ahịa azụmaahịa a pụrụ ịdabere na ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji robot. E kwuwerị, robot ga-achọ ikpo okwu iji rụọ ọrụ ya!
Goodzọ dị mma iji lelee iwu nke ụlọ ọrụ na-ere ahịa azụmaahịa bụ iji hụ na e debara aha ya n'akwụkwọ ikike.
Ezigbo ụlọ ọrụ ga-arụ ọrụ n'okpuru iwu ikikere ikike ma hụ na ndị na-ere ahịa na-ekewapụ ego nke ndị ahịa. Nke a bụ ihe a na-ahụkarị n'ọtụtụ mpaghara ma ọ pụtara na ụlọ ọrụ ga-edebe ego gị iche na ego azụmaahịa n'onwe ya.
Site na iwu, ndị na-ere ahịa nwere iwu iwepụta akụkọ site n'oge ruo n'oge na-ekwupụta ọrụ ha. Ndị na-achịkwa usoro ahụ na-enyocha ma nyochaa data a. N'ihe banyere egwuregwu rụrụ arụ, ahụ ndị a dị n'ime iwu iji mezuo nsonaazụ na onye na-ere ahịa.
E nwere ihe dịka 20 forex ndị na-achịkwa ụwa niile. Fọdụ ndị a maara nke ọma bụ:
FCA: Njikwa Omume Ego (United Kingdom)
CFTC: Ahịa na Ọdịnihu ahia Kọmịsh (United States)
BaFIN: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Germany)
Anyị na Mụta 2 ahia naanị kwadoro ezigbo ndị na-ere ahịa azụmaahịa.
Ngwongwo Forex kacha mma nke 2021
E nwere ọtụtụ narị mmadụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ puku ndị na-enye onyinye na-enye rọbọt mbu - ọtụtụ n'ime ha yiri ka ọ dị utịp dị ịtụnanya.
Site na nke ahụ, anyị adọla gị aka na ntị ọtụtụ oge banyere ọnya ndị nwere ike ịhọrọ mgbanaka mgbanaka na-ezighi ezi, yabụ ugbu a, anyị ga-edepụta dọkụmentị 5 kachasị elu maka ịtụle gị na 2021.
1. FX Iwe
Nke a ga-abụrịrị otu n'ime igwe mgbagha kachasị ewu ewu na ndepụta anyị. Ọ na - azụ ahịa kwa ụbọchị yana ọghọm dị ala yana atụmatụ usoro dị oke mma. Ahịa kachasị elu n'oge ọ bụla bụ 7, ọ ga-emeghere naanị obere oge.
FX Fury bụ skal na mgbochi oge ma na-agba ọsọ na oge M15. Karịsịa n'ime afọ ole na ole gara aga, robot a egosila ikike imeghari na ụzọ ego ọhụrụ.
N'oge edere, ikpo okwu nwere ihe karịrị iri isii mmelite akpaka, nke na-aga n'ihu na-eto. Onye na-eweta robot na-enye ikike ngosi na-akparaghị ókè na ikike ọ bụla, nke pụtara na ị nwere ike ịnwale ihe ịchọrọ ma ọ bụ mkpa ịchọrọ.
Nwere ike ịchọrọ robot forex ka ọ bụrụ 'onye na-enyocha eziokwu' n'achụmnta ego gị. Mana ụfọdụ ihe ndị ọzọ ị nwere ike ịtụ anya site na FX Fury robot bụ ndị a:
Nkezi mmeri pasent nke 93%
Uru 15 laghachiri azụ na 466,725%
10 ahia ma ọ bụ n'okpuru
MT4 ore dakọtara
Na-emepe emepe maka afọ 5
100% Akaụntụ Live Myfxbook
Ihe karịrị mmadụ 2,500 na-agba FX Fury na akaụntụ ha kwa ụbọchị, yana dịka ọtụtụ ndị na-enye robot a na-ahụkarị, enwere mmelite ndị agbakwunyere n'afọ n'afọ.
Nkwupụta mmeri nke 93%
Nsonaazụ gosipụtara site na Myfxbook
Gaa na FX Fury
Enweghị nkwa na ị ga-enweta ego na onye na-eweta ọrụ a
Steam Forex Steam na-akpaghị aka. Na-enwe ike ibudata forex robot na mara mma nke ukwuu ka ọ na-amalite azụ ahịa gị ozugbo site na igbe.
Ọ bụrụ na ị dị elu karịa na azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa ị nwere ike ịhazi ngwa ngwa ma bulie robot iji zụọ ahịa n'ọnọdụ gị. Nke a ga - enyere gị aka ijide obere njikwa, mana jiri robot forex naanị ebe ịchọrọ.
Na Forex Steam robot yiri ka ọ na-eto eto na-eto eto ma na-ewere ya dị ka onye a pụrụ ịtụkwasị obi ma bụrụ onye a pụrụ ịtụkwasị obi. N'ezie, na azụmaahịa azụmaahịa, ọ nweghị nkwa ọ bụla, mana ịnwe ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe bụ ezigbo akara nke azụmahịa ọ bụla.
Ikpo okwu na-enye mmelite n'efu oge niile nke pụtara inwekwu uru maka ndị ahịa. Offọdụ n'ime atụmatụ kacha mma Forex Steam gụnyere nke a robot bu:
Mgbanwe na ụgwọ ọrụ-ihe egwu
Otu ọnụahịa - nsụgharị dị iche iche
Ihe karịrị 3,000 ndị ahịa na-arụ ọrụ kwa ụbọchị
Nkezi mmeri ọnụego 75%
Izere ahia ojoo site na iji 'max mgbasa'
Nkwalite nkwụsị trailing maka ịgba ọsọ ka mma
Nnukwu ahịa na-agbanwegharị maka 2021 gaa n'ihu
Enwekwara nhọrọ nke ụdị ọkụ nke mgbanaka mgbanaka, maka ndị na-ahọrọ itolite pọtụfoliyo ha ogologo oge. Ikpokoro a bụ otu n'ime ọnụ ala dị ala karịa ahịa.
Nkezi mmeri ọnụego nke 75%
Na-ekwu maka ịdọta ndị ahịa ọhụrụ 3,000 kwa ụbọchị
Ọdịdị ọnụahịa dị mfe
Gaa Forex Steam 10
3. Ọnụọgụ abụọ Strategy Forex Robot
Ọ bụ ihe na-akpali mmasị na ndị okike nke ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ Forex Robot bụ ndị na-emepụta ndụ na ndị ahịa n'ezie. Dị ka aha ahụ na-egosi na nke a Forex robot na-elekwasị anya n'ahịa nhọrọ ọnụọgụ abụọ. Nke a bụ otu ahịa nke yiri ka ọ nwere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-ere ahịa broker.
Otú ọ dị, robot forex a, na-enye atụmatụ 2 nke e wuru gburugburu esemokwu - atụmatụ ndị a bụ 'ike' na 'mmụọ'. Kama ịre ngwaahịa abụọ dị iche iche, ha ejirila okpukpu abụọ.
N'ikwu okwu n'ozuzu, atụmatụ ndị a dakọtara na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-ere ahịa. Ọ bụ ezie na ịnwere ike ịchọta na ọ bụrụ na nhọrọ ọnụọgụ abụọ ọtụtụ ndị mmepe ngwaahịa na-eleghara anya iji mee ka nsonaazụ ahịa dị. Yabụ weebụsaịtị nke atọ dịka Myfxbook enweghị ike ịnabata nsonaazụ ndị a.
Ọnụọgụ abụọ Strategy forex robot n'aka nke ọzọ na-eweta nsonaazụ kwa ụbọchị site na eserese na ibe weebụ ha. Ha na-ejikwa usoro nyocha azụ zuru ezu na meta-ahia 4. Nke a pụtara na a nwaleela usoro ahụ nke ọma ruo ọtụtụ afọ na njedebe tupu ha amalite ahia.
Nke a bụ obere mmebi nke ihe ị ga-atụ anya site na nke a robot robot:
Robdị robot Forex: Nhọrọ ọnụọgụ abụọ
Ahịa: N'okpuru $ 200
Ha niile dị
M15 oge (mmebi oge 15 nkeji)
Nkezi nke 70-95% mmeri ọnụego
Ọnụahịa nke ihe na-erughị $ 200
Nwere ike ịzụ ahịa ọ bụla dị ugbu a
Ogologo mmeri mmeri n'etiti 70% -95%
Gaa Leta ọnụọgụ abụọ Strategy Robot
Nke a Forex robot bụ 100% akpaghị aka ma na-azọrọ na ndị ahịa nwere ike irite uru ruru $ 16,000 n'otu ọnwa. Ọ bụ onye ahịa Forex ama ama nke akpọrọ Rita Lasker kere Forex Astrobot.
Ngwaọrụ a MT4 Forex na-enye gị ohere ịzụ ahịa site na oge H1, M30 na M15 ma tinye ego niile.
A ga-amara gị ọkwa maka azụmaahịa ọhụụ ọhụụ ọ bụla site na nhọrọ 3: MT4 popup alert, Mobile push push or email.
Enwekwara njikwa njikwa ego na-enyere gị aka ịgbanwe oke nke gị mgbe ọnọdụ ahịa dị ka ihe dị mma.
N'ihe banyere mgbanwe dị oke ọnụ ahịa, enwere algorithm a na-akpọ 'slippage'. Mgbapu mmiri nwere ike igbochi gị ịbanye na ahia na oke na-ezighi ezi.
Dabere na nke ugbu a ahịa na TakeProfit tech na a robot awade bụla ruo 3 iri uru etoju. Offọdụ ihe ndị ọzọ ị ga-atụ anya n'aka Forex Astrobot bụ:
Nkezi mmeri ruru 80%
M15, M30 na H1 oge
Ọnụ - site na $ 100 ruo ihe dịka $ 230 (maka 'ụdị kacha')
Atụmatụ nkwụsị trailing
Ikpokoro a na-enyekwa ego ịkwụghachi ego 30 ụbọchị, ọ nweghị ihe kpatara gị ịchọrọ ịkwụsị.
24/7 nkwado dị
Na-ekwu maka mmeri mmeri ruru ihe ruru 80%
Nkwekọrịta ego ego 30 ụbọchị
Gaa Leta Forex Astrobot
Otu a nwere ihe ngosi 8 na 3 robot, ha bụ Nnukwu Azụ, EA Trade Machine na Rocket EA. Ha atọ bụ robot 'scalping' na ọnụ ahịa ya sitere na € 97 - € 199.
E nwere ọtụtụ ihe ọmụma banyere a robot Forex, ma anyị ga-eme obere mmebi nke ọ bụla nke 3 Forex robots, nke ọ bụla na aka ha.
EA ahia igwe
Nke a bụ robot forex nke abụọ nke otu a mepụtara yana bụkwa ikpo okwu scalping. Enweghị nkọwa zuru ezu banyere atụmatụ dị maka robot a.
Ihe mgbado ụkwụ na-abịa na ntọala akọwapụtara, usoro ntuziaka onye ọrụ na usoro site na usoro. Ọnụ ego maka ikpo okwu a bụ € 199 maka enweghị njedebe, yana and 149 maka ọkọlọtọ.
Atụmatụ ndị EA Trade Machine kwere nkwa gụnyere:
Pacific, Asia na America nnọkọ trading oge
Ụdị ego abụọ 7
20% - 50% uru bara uru (kwa ọnwa)
E kwuru atụmatụ a dị ka 'ịzụ ahịa na ọnọdụ nke usoro ụwa'
Ihe omuma a bu ihe ndi otu Robomaster EU kwadoro ka ha mee. Nwere ike ịzụta ikikere na-akparaghị ókè maka € 199 ma ọ bụ otu maka € 149. Rocket EA na-agụnye ntuziaka miri emi, 24/7 nkwado ndị ahịa na faịlụ nhazi ntọala kachasị mma.
Rocket EA forex robot ga-ere ahịa ego abụọ nke 12 n'otu oge ahụ, nke a na-enyere ha aka ịgbasa ihe ize ndụ ahụ. Abia na nsonaazụ ahia enwere 12 mgbagha di iche.
Featuresfọdụ atụmatụ na-enye site na Rocket EA bụ:
Ahịa 24 awa n'ụbọchị, ụbọchị ise n'izu
Oge ahia Asia
10% - 20% uru bara uru
Currencygwọ ego 15 maka ahia
Nnukwu Azụ EA
Emepụtara robot Forex a maka ọnọdụ ahịa ọ bụla, ọ na-achọ ịnye uru na-adịgide adịgide site na iji algorithm na-agbanwe agbanwe.
Ọnụ nke Nnukwu Azụ EA robot bụ € 120 maka ụdị a na-akparaghị ókè, yana € 97 maka otu. Dị ka ndị ọzọ 2 otu a ọ na-abịa na zuru ezu akwụkwọ ntuziaka, mwube faịlụ na nkwado.
Onye na-eweta ọrụ a chịkọtara ihe enyere na nke a bụ ihe ha na-ekwu:
Ejiri ahia USD / JPY
10% - 50% uru inweta
Ahịa na azụ azụ (dabere na ntụziaka nke usoro a na-aga)
N'ụzọ dị mwute, ọ nweghị nsonaazụ ahịa ọ bụla dị maka robot a.
3 robot ịhọrọ site na
Pricdị ọnụahịa dị mma
Ọtụtụ atụmatụ Forex gụnyere
Gaa na Robomaster EU
Dịka anyị kwurula, forex robot bụ ụzọ dị mma iji zụọ ahịa azụmaahịa na-enweghị iji ọtụtụ ọnwa ma ọ bụ ọbụlagodi afọ ịmụ otu esi azụ ahịa. Nkà na ụzụ agawo n'ihu nke ukwuu na robot forex nwere ike ịzụta ma ree n'aha gị ebe ị na-aga n'ihu na ndụ gị.
Jiri nlezianya na-aga n'ihu mgbe niile - dịka enwere ọtụtụ ndị na-enye ojoro nọ n'ọrụ na oghere. Ọ dabara nke ọma, ụdị mgbanaka niile anyị depụtara na ibe a sitere na ndị na-enye ha iwu. Ma, ọ bụrụ na ị kpebie ịpụ na ndepụta a - mgbe niile jide n'aka na ị ga-ebu ụzọ mee nyocha.
N’ụzọ dị mkpa, iji akaụntụ ngosi ngosi, ịkwụghachi ego na nnwale efu bụ ụzọ ezi uche dị na ya iji nweta mmetụta maka robot forex tupu ị pụọ na ego gị tara ahụhụ.